Mayelana NATHI - Chinatown Grain Machinery Co., Ltd.
IChinatown Grain Machinery Co, Ltd. inikeza imishini ephelele nensizakalo yokukhiqiza ukudla nezimboni zokucubungula okusanhlamvu, okufana nofulawa kakolweni, ifektri yefolishi, kanye nesitshalo sokulungisa irayisi. Kuze kube manje, imikhiqizo yethu ifaka ukuhambisa imishini, imishini yokuhlanza, imishini yokugaya ufulawa, njalonjalo. Ziye zamukelwa ngamakhasimende amaningi ekhaya nakwamanye amazwe.
Le nkampani igxile ekuvuseleleni ubuchwepheshe, ithuthukise ikhono lokukhiqiza kanye nekhwalithi yomshini. Le nkampani ihole ekusungulweni komshini wokusika we-CNC we-CNC, umshini wokugoba we-CNC, ama-lathes e-CNC neminye imishini yokucubungula ethuthukile.
Ngesikhathi esifanayo ithengwe i-CNC machining centre, umshini we-CNC oyisidina, umshini we-CNC lathe, i-grinder ebusweni, umshini wokugibela kanye nokunye ukutshalwa kwezimali okuthuthukisiwe, futhi wanezela umugqa wokukhiqiza we-electrostatic. Ikhwalithi yomkhiqizo ingathembiswa yilezi zinsiza zemishini yokukhiqiza ezinokwethenjelwa.
Inkampani yethu yamukela ipuleti lensimbi umshini wokusika we-laser, umshini wokugoba we-CNC, i-carbon dioxide arc Welding ne-argon arc Welding, isikali se-welding, i-rotary welding othomathikhi, i-electrostatic spraying surface treatment, intuthuko eqhubekayo namamodeli amasha. Imikhiqizo yethu ayinakho ukusebenza okuhle kuphela, kepha futhi kulula ukufakwa nokugcinwa ngezindleko eziphansi. Umkhiqizo onobuchwepheshe obuthuthukile, ikhwalithi ethembekile, nokubukeka okuhle uthokozelwe ngamakhasimende amaningi.